Powtoon: Mepụta vidiyo na ihe ngosi | Martech Zone
Powtoon: Mepụta vidiyo na Ihe ngosi
Monday, October 14, 2013 Thursday, May 8, 2014 Douglas Karr
Powtoon na-enye usoro ntanetị nke na-enye ndị ọkachamara Marketingzụ ahịa ahịa, Obere azụmaahịa na mmalite na ndị na-azụ ọzụzụ na ndị nkuzi ọzụzụ iji mepụta vidiyo na-aga aga. Ezigbo enyi Ben Catalist McCann nke Ndị na-ere ahịa Ahụike Catalist nwere nwa nwoke nwoke 10, bụ Noa, mepụtara a kediegwu nkọwa video na oké ọnụ Care Act na n'ọma ahịa nhọrọ maka ndị ọrụ na ndị ahịa. Ọ rụrụ ọrụ dị ịtụnanya!
Powtoon animation ngwanrọ bụ a free n'elu ikpo okwu na-enye ohere marketers ịzụlite jụụ animated mkpachị na animated n'ihu n'ihi na gị na ebe nrụọrụ weebụ, ụlọ ọrụ nzute, ahịa pitch, nonprofit fundraiser, ngwaahịa igba egbe, video malitegharịa, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ i nwere ike iji ihe animated akọwa video. Ihe ndebiri animti PowToon na - enyere gị aka mepụta ihe ngosi na - aga aga na vidiyo na - akọwa ihe nkiri na - amalite. Onye ọ bụla nwere ike iji PowToon mepụta eserese dị egwu ngwa ngwa, na-enweghị ọnụahịa ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ na -eme egwuregwu na-achọ.
KeyToon si Key Atụmatụ na Uru:
Easy & Kensinammuo - Youkwesighi ịbụ ọkachamara animator ka ịmalite PowToon taa! Ha na-enye ngwa ọrụ egwuregwu niile ị ga - achọ ịmalite ịmalite ịmepụta vidiyo na - akọwa ihe nkiri na - aga n'ihu. Site na mbido ruo na njedebe, a ga-eduzi gị site na usoro dị ịtụnanya, na-ebute vidiyo na-adọrọ adọrọ nke ga-ejide ndị na-ege gị ntị.
Otu Pịa mbupụ - Ozugbo imepụta Powtoon, ọ bụ nke gị ruo mgbe ebighi ebi iji mee ihe ịchọrọ! Want chọrọ inweta ihe ịtụnanya ọhụụ ọhụrụ gị nye ọtụtụ mmadụ ka o kwere mee! Dabara nke ọma, ha mfe mbupụ usoro ọkọkpọhi gị PowToon animated video on Youtube ma ọ bụ ibudata na kọmputa gị na-eme dị ka ị chọrọ na dị nnọọ di na nwunye clicks.
Nsonaazụ ọkachamara - Agaghị emezi sọftụwia ahụ na - aga aga (ma dịkwa oke ọnụ)! Emebela ngwa ọrụ PowToon ma nwalee ya iji hụ na ọ dị mfe dị ka o kwere mee ma ghara ịchụ àjà otu ogo ma ọ bụ ọkachamara. Have nwere ngwa mmemme ọ bụla achọrọ n'aka gị, ma ha na-agbakwunye atụmatụ, ndebiri na ụdị mgbe niile!
Lelee ihe ngosi gị - Họrọ nke gi Nweta nnweta PowToon nke ahụ kacha arụ ọrụ maka gị! Mee ka ihe ngosi gị dị ndụ n'ụzọ dị ike! Ọbụna isiokwu kachasị mfe, akọrọ na akụkọ na-enweta zest na ume ọhụrụ mgbe a na-agwa ha okwu site na vidiyo animated. Site na mkpụrụedemede gbara ọkpụrụkpụ, onyonyo na-esepụta anya, yana usoro ederede na-arụ ọrụ (na ọtụtụ ndị ọzọ!), PowToon na - enyere gị aka ịdọta uche na nchepụta nke ndị na - ege gị ntị, karịa ihe ngosi larịị, ihe ngosi PowerPoint gbara agba ị tụkwasịrị obi.
Cheta na: Chekwaa 45% nke ndebanye ụlọ ọrụ nke afọ 1 na nke anyị njikọ mmekọ!
Tags: animated nkọwa vidiyoihe omuma ihe omumaihe ngosi animatedanimated video ndebirianimated vidiyonkọwa vidiyoOgbepowtoon animation ngwanrọ
Ebumnuche maka ịtụgharị ọdịnaya ka ọ bụrụ ntụgharị
Ahịa ọdịnaya maka ala na ụlọ
Ọkt 15, 2013 na 5:03 AM
Akwa post Doug! Daalụ maka ịkekọrịta… Enwere m nnukwu ọgụgụ! ..